Hlola iPort-au-Prince, eHaiti - World Tourism Portal
Hlola iPort-au-Prince, eHaiti
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili ePort Au Prince, eHaiti.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yePort au Prince
Bukela ividiyo ekhuluma ngePort au Prince
Hlola iPort-au-Prince inhlokodolobha nedolobha elikhulu kakhulu Haiti. Kuleli dolobha elihle, uzothola iminyuziyamu yaseHaiti, izimangaliso zemvelo, izinqola, ukuphumula, amapaki, kanye nezimanga eziningi. Kuseduze nasendlini ebizwa ngokuthi yiPétionville. Leli dolobha yilapho intuthuko enkulu yaseHaiti yenzeka khona-ke qiniseka ukuthi uvakasha!
Idolobha likhulu futhi liyaphithizela, liqala ekuseni kakhulu. Kuningi okwakha kabusha nokwakha okusha selokhu kwaba nokuzamazama komhlaba kwe2010, kepha kwezinye izindawo ungahle ubone amarubhu noma amadolobha amancane wamatende. Kukhona umphakathi omkhulu we-expat futhi, iningi labasebenzi abasizayo nokunye okunjalo. Kunezindawo eziningi ezinhle zokudla nezindawo zokulala, ikakhulukazi endaweni engcebile esePétionville kodwa nasePort-au-Prince efanele.
Isikhumulo sezindiza i-Port-au-Prince (PAP) sisebenzela izindiza ezinkulu eziningana.
ISigodlo Sikazwelonke sadilika phansi ngesikhathi sokuzamazama komhlaba futhi sinikeza ngesinye sezikhumbuzo ezesabekayo zamandla okuzamazama komhlaba ePort-au-Prince. Ekuqaleni kwe-2014 isakhiwo besisusiwe. Elinye lamadolobha amaningi amatende asePort-au-Prince lalikhona ngaphesheya komgwaqo kusuka endaweni yesigodlo. Imicimbi yetende manje isisuliwe futhi isiza siphinde sisekhaya elinye lamapaki amakhulu eHaiti, iChamps-de-Mar.
Isonto lesonto lethu iSilo sama-Assidence Port-au-Prince elikhulukazi lisemgwaqweni osuka esigodlweni futhi ngokufanayo liyigobolondo lenkazimulo yalo yangaphambili. Izakhamizi ziyaqhubeka zithandaze ngaphandle kwesakhiwo sazo esiqhekekile, futhi imingcwabo ibanjwa njalo emfuleni ongemuva kwesakhiwo esikhulu.
I-Musée du Panthéon National Haïtien. Isikhathi ngasinye sihlukaniswe izigaba eziqukethe izinto ze-paragon zaleso sikhathi: ihange le-Santa Maria, ifulege likaChristopher Columbus, liyisizinda sendawo yobudala yokuhlola.
Elinye lamapaki kazwelonke ambalwa eHaiti, iFort Jacques ingaphandle kwePort au Prince cishe ngemizuzu engu-45 inyuka intaba edolobhaneni laseFermathe. Isimo sezulu sipholile (ungadinga ijekete elula izinsuku ezithile) futhi ukubuka kuyamangaza. Uzothola ukubukwa okuhle ezansi nedolobha kusuka ehlathini likaphayini eligcinwe. Umlando wale nqaba uyabonakala, kepha abafana bendawo bazokukhombisa ngentokozo bezungeza futhi basebenzise isiNgisi sabo esilindelwe kangcono kunamadola ambalwa (kuwufanele). Futhi bangabathwebuli bezithombe abazimisele ngalesi silungiselelo esihle. Ukuphunyuka okukhulu ekushiseni lapho ugu lungahlelekile.
I-Pétionville, isigodi esicebile esinabantu abaningi bokuphila ebusuku, imigoqo kanye nezindawo zokudlela.
IMarche de Fer (I-Iron Market) Imakethe egcwele kakhulu yabathengisi abathengisa konke kusuka kwizandla ezifana ne-voodoo paraphernalia kuya kokudla okusha. Yindawo eyinselelo, ecindezelayo futhi edinayo ongahamba kuyo njengoba izixuku zabathengisi abanesifiso sokukubamba zibambe futhi kuhlangana okuqinile kwabathengi, izitebele, nezimpahla ezihambayo kuphazamisa isinyathelo sakho sonke, esidinga ukuthi ubhukude ubheke ebuntwini. Uzothola okusungulwayo okuphefumulayo kobuciko obuqokiwe bezandla: izazi zokubhula, imaski, izinti, imidwebo, ama-globes, amasethi wetiye, amabhande kakhukhunathi, njll.
I-Village Artistique (Idolobhana Lamaciko). Yize ubuchwepheshe iCroix des Bouquets bungeyona iPort au Prince, ihlangene nedolobha (lihlukaniswe kuphela ngumfula) kangangokuba lingabhekwa njengendawo engaphansi komhlaba. Izingcweti zensimbi lapha zivuselela imigqomo yensimbi yakudala (iziqukathi) futhi zenze izingcezu zobuciko obumangalisayo. Emakhelwane weNuwailles uzobona indawo njengoba ubona inqwaba yezinhlamvu zensimbi zilenga ngaphandle kwemizi yabaculi, futhi isayina nokukhangisa ezitolo. Abadwebi babambisene ekwenzeni indawo encane enhle nethandekayo kufaka phakathi izibani zomgwaqo ezihlotshisiwe nesithombe esikhulu somfazi osebenza ngensimbi. Amanani ahamba phambili ongawathola, futhi okuhlangenwe nakho kokubona umsebenzi wenziwa akusizi.
Imvamisa kuzoba nabathengisi abaseceleni komgwaqo kanye nokuthengisa kahle imisebenzi yezandla eyenziwe ngezandla. Kukhona ezinye eziseduze kwesisekelo se-UN kanye nakuPan-American Highway.
Okungenani kukhona amabhange amabili ama-ATM: Scotiabank naseSogebank. Ngisho ne-ATM ivaliwe ngamaSonto. Amabhange lapha asondele kakhulu, ngisho naphakathi nezinsuku.
Ukudla ngaphandle ePort-au-Prince kuyabiza ngokumangazayo.
Nomaphi lapho ungena khona Haiti, kunokudla okumnandi okutholakalayo. Ukuphepha kuhlala kuyinkinga lapho udla ukudla okuhlala emgwaqweni, kepha ungathola izincomo ezivela kubantu abathembekile. Ukudla okudla okudla okwehla esiphundu kufaka phakathi i-banana banana ("papita") umkhiqizo owaziwa ngophuzi ophethwe ngamabhasikidi kubhasikidi emakhanda abathengisi. Izithelo zitholakala kabanzi futhi zikhulunywa ngokujwayelekile, lapho kukhuba ukucekeceka, kuphephe khona. IFritay yigama elijwayelekile lokudla okuthosiwe, futhi ngokuvamile liqukethe izingulube zenyama yengulube (grio), imbuzi (“kabrit”) noma inkukhu (“poul”) enamapareti ethosiwe (“bannan”) kanye nohlobiso ngesiqholo obizwa nge- “pikliz.” Obhodile neziphuzo ezithambile eziphephile namanzi nazo zitholakala kalula emigwaqweni futhi kushibhile kakhulu ukwedlula ezitolo. Imvamisa iqandiswe emanzini anosawoti, ngakho-ke uzofuna ukukhipha phezulu ngaphambi kokuphuza.
Kukhona izitolo zokudla kulo lonke idolobha.
Iziphuzo ezijwayelekile zotshwala zibandakanya i-rum emuncu ne-Crémas, isiphuzo esidakayo esenziwe ngokhuni kanye ne-vanilla. I-Rhum Barbancourt i-rum yasendaweni ehamba phambili, i-5-star iyikhwalithi ephezulu kunazo zonke futhi i-3-star ihloniphile. IBiere Prestige ilondolozi lendawo futhi lihle impela.
Iziphuzo ezithambile ezisebhodleleni zitholakala emigwaqweni ngemali ephansi kakhulu ezitolo, kepha qaphela izinga lokuhamba, noma uzokhokha okungaphezu kokudingayo.
Phuza kuphela amanzi asemabhodleleni!
Ihhotela laseCaribbean Lodge lenziwa ngezinto zokuhambisa!
Azikho izindawo ezingabizi kakhulu zokuhlala, izinqumo nje ezingabizi kakhulu.